सेक्स डल परिवारकाे सदस्य बनेपछि...
सेक्स डल परिवारकाे सदस्य बनेपछि…
एजेन्सी । सेक्स डललाई धेरै मानिसहरु असामान्य र असम्भव मान्ने गर्छन् । कृतिम र अप्राकृतिक हुने कारणल पनि यसलाई मानिसहरु खुलेर उपयोग गर्न चाहँदैनन् । विशेषगरी एकल पुरुषहरुले लुकीलुकी यसको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, यदि कसैले आफ्नै छोराछोरी र पत्नीको अगाडी सेक्स डलको प्रयोग गर्छ भने त्यो सबैका लागि आश्चर्यको विषय बन्नेछ । यस्तै घटना अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा पाइएको छ जसले धेरैलाई चकित पारिसकेको छ ।
नर्थ वेल्सका ३६ वर्षीय एरान स्क्वाइर सेक्स रोबोटलाई परिवारकै साथ राख्ने गर्छन् । उनले आफ्ना छोराछोरी र पत्नीलाई समेत उक्त सेक्स रोबोटको बारेमा बताएका छन् । अहिले त्यो रोबोट उनको परिवारको सदस्य भएको उनले बताए ।
त्यो सेक्स रोबोटमा एउटा फ्यामिली मोड भन्ने सफ्टवेयर राखिएको उनले बताए । उनका अनुसार सो मोड अन गरेपछि रोबोटले बच्चाहरु र आफ्नी पत्नीको अगाडी केही नराम्रो र खराब प्रदर्शन गर्दैन । सेक्स रोबोटको वास्तविक काम बाहेक त्यसले बच्चाहरुलाई जनावर, मनोविज्ञान र विज्ञानका सम्बन्धमा समेत जानकारी दिन सक्ने हुनाले पनि उनीहरुलाई त्यो रोबोटसँग कुनै आपत्ति नरहेको बताएका हुन् ।
त्यस्ता सेक्स डल महिलालाई प्रतिस्थापन गर्न नभई मद्दत गर्नका उद्देश्यले बनाइने एरानले बताए । ३८ वर्षीय एरानकी पत्नी ह्याना पनि उक्त सेक्स डलसँग धेरै खुसी भएको बताउँछिन् । उनीहरु तीनजना सँगै सुत्ने गरेको समेत उनले खुलासा गरेकी हुन् । सो रोबोटलाई उनीहरुले परिवारकै सदस्य जसरी माया दिने गरेको उनीहरु बताउँछन् । सेक्स रोबोटको प्रयोगले रोगबाट पनि बचाउने र परिवारजस्तै भएर बस्न सक्ने हुनाले पनि धेरै उपयोगी भएको एरानले बताए । आफ्नी पत्नी र बच्चाहरुले पनि त्यसप्रति राम्रो प्रतिक्रिया दिएकोमा उनले निकै खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
अष्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्सclose
यस्तो पनि, विश्वकप
कट्टुका कारण कारबाही !
भारतमा बन्यो किर्तिमानी औंठी
अत्याधीक गर्मीपछि यी युवकले गरे सूर्य देवता विरुद्ध मुद्दा दायर
अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई भेट्न शौचालय बोकेर किम जोङ
हलिउड सेट जस्तै छ यो चीनको भूताहा गाउँ
फोहोरको थुप्रोमा बसेको केही मिनेटमै महिनौंको फोहोरको पहाड सफाई
‘टपलेस स्नान’का लागि जनमतसंग्रह
कर्मचारीलाई लाइनमा उभ्याएर हाकिमको झापड !
संसद भवनको बाथरुम नै महिला सांसदका लागि असुरक्षित(भिडियोसहित)
समलिङ्गीको आशंकामा छोरालाई पिटेपछि आमालाई यस्तो सजाय
रेष्टुरेन्टमा खाना खाइरहेको बेला गोजीमा मोबाइल पड्किएपछि भागाभाग… (भिडियोसहित)
भारतमा २४ वर्ष जेल बसेर सोमबार नेपाल फर्किएका गणेशको व्यथा
नैरिफनको रुखमा जहाँ निर्वस्त्र नारी आकृतिका फल फल्छन्
पत्नी पीडित पुरुषका लागि आश्रम खुलेकोबारे थाहा पाउनुभएको छ ?
‘बिहान उठ्दा आफ्नै श्रीमतीलाई चिनिन’
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई नै अंग्रेजीमा समस्या, श्रीमतीको नाम लेख्न पनि छुट्यो पसिना
शारीरिक सम्पर्क गर्दा गर्दै महिलाको ज्यान गयो
यौन सम्बन्धपछि प्रेमीलाई जलाउँथिन् यी अफ्रिकी रानी
भाइको शव लिएर घर जाँदा दाजुको मृत्यु
महिलाको नाङ्गो शरीरमा परिकार पस्कने अचम्मको जापानी परम्परा